Egwuregwu vidiyo kacha mma nke 2015 | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu vidiyo kacha mma nke 2015
Anyị na-agaghị na-ekwu goodbye na 2015 enweghị mbụ akafiakde videogames kacha mma na anyị enweela ike ịnwale n'ime ọnwa iri na abụọ ndị a jupụtara na mbipụta maka sistemụ niile: dakọtara, dị ka mgbe niile, yana katalọgụ buru ibu ma dịgasị iche iche na mkpịsị aka gị, PlayStation 4 na-achịkwa ahịa njikwa, Microsoft etinye niile anụ na imi ihe na mmemme dika okirikiri ọkụ n'isi 5 na ọbụna Wii U nwere aha ndị dịka Splatoon o Super Mario Maker, nke ndị ọrụ ya masịrị ya.
Na ubi multiplatform anyị enweela nnukwu egwuregwu: The Witcher 3 Ọ bụ nnọọ a sensashion-ya kwuo na-agba akaebe na nke a-, nke ukwuu na-atụ anya Star Wars Battlefront bụ otu n'ime ndị kasị egwuri egwu, Ngwá ọrụ nke ígwè Gear Solid V: The Phantom Pain bụ ihe ọzọ na nke nọ na egbugbere ọnụ nke legions nke gamers ... not gaghị agbaghara anyị pụrụ iche ebe anyị na-enyocha isi aha nke 2015.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ egwuregwu kachasị mma ị ga-enweta, ma na nke atọ na nke mbụ, agha kachasị ukwuu edobere na Star Wars eluigwe na ala, ihe omume malitere na akụkọ ifo mbụ ahụ ewepụtara na 1977 na nke gosipụtara otu ọgbọ dum. You nwere ike ịlụ ọgụ n'ụkwụ ma ọ bụ na-ebugharị ụgbọ ala ndị kachasị ewu ewu na aha, na-egosipụta ma onye agha nnupụisi na nke alaeze ukwu na ọbụna nwee akụkọ ifo na mkpịsị aka gị dị ka Darth Vader ma ọ bụ Luke Skywalker.
Okirikiri ọkụ n'isi 5: ẹkekpemede
Onye isi Master alọghachitela n'aka 343 Industries na-egosi akara mmalite nke ọma nke usoro a, enwegoro ihe karịrị $ 400 nde na ụbọchị mbụ ya na ụlọ ahịa. Halo 5 bụ isi nke abụọ nke trilogy nke malitere na egwuregwu ikpeazụ na aha anyị hụrụ na Xbox 360, ebe ụwa dị ọzọ n'anya nke ajọ ifufe ahụ na naanị Nna-ukwu Isi nwere ike ịkwụsị oke egwu dịịrị onye ọ bụla. Ọnọdụ egwuregwu ya na-aga n'ihu na-abụ nnukwu ogidi nke usoro ihe omume ahụ, nụchaa karịa mgbe ọ bụla yana ọnọdụ Warzone ọhụrụ nke meworo ka onye ọ bụla nwee mmasị.
Ngwá ọrụ nke ígwè Gear Solid V: The Phantom Pain
Emechara ihe omume ikpeazụ nke akụkọ akụkọ saga a na-arịọ arịrịọ, na oge a, kama ịbụ naanị aha Sony, a tọhapụrụ ya na nyiwe ochie na n'ọgbọ ọhụụ, na-enweghị oke esemokwu. N’agbanyeghi na stampụ Hideo Kojima enweghị mgbagha, mmekọrịta siri ike dị n’etiti ndị Japan na-ebipụta akwụkwọ na onye mbipụta akwụkwọ, bụ Konami, nwere nsogbu n’egwuregwu, ọ bụ ezie na ọ bụ ahụmịhe ma na-enye ọ ofụ ogologo oge, ị nwere ike ịsị na ọ bụ juru n'ọnụ na rosh. Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke saga, egbula oge ịbanye na akpụkpọ anụ nke Venom Snake iji gafee Afghanistan na Angola iji chọọ isi nwoke ahụ bibiri ụlọ gị na ụmụnne gị.
Ndi mara mma na ihe uto bu ndi kachasi nma nwere ike iso ndi mmadu a na-eme egwuregwu site na Nintendo, na-elekwasị anya n'egwuregwu ntaneti, ala nke Big N nwere ihe isi ike iji obi ike na-azọ. Splatoon na-enye gị ọtụtụ frenetic team agha na Wii U na ezigbo ehihie sparring na ndị enyi - ma ọ bụ ndị iro. Na mgbakwunye, enwere ike ịchọta ya na ọnụego belatara, ihe ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụ na ọ chọghị, ọ bụ ihe mkpali ọzọ ịgakwuru mmemme a.
Nwoke usu ahụ na-amalite na consoles ndị na-esote ọfụma, dịka anyị na-emebu n'ọgbọ gara aga. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ otu, yabụ nke a bụ aha na-aga n'ihu n'akụkụ a - ma lezie anya, Batman Arkham mbụ batara na 2009-. Ọ bụ ezie na mgbakwunye nke Batmobile ezubere iji weta ọtụtụ dịgasị iche iche na egwuregwu, mana na omume anyị ga-achọpụta na e tinyela ụgbọala a nnukwu mkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha nke onye nyocha kachasị mma n'ụwa ma nwee ọ chaptersụ isiakwụkwọ ndị gara aga dị ka dwarf, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha ịlaghachi n'okporo ámá nke Gotham.
Geralt nke Rivia abiala n'otu oge na consoles na PC na nnukwu njem ya ruo taa. Ebumnuche ahụ, ụda ụda ya na egwuregwu ya nke ọma mere ka Witcher 3 bụrụ otu egwuregwu kachasị ike nke 2015 a, ọ bụkwa na e nweela ọtụtụ onyinye na-adaba na mmemme nke okporo osisi nke CD Projekt RED. Site na ihe ịga nke ọma a, anyị ji n'aka na anyị ga-enwekwu ọhụụ banyere amoosu, ọ bụ ezie na mbụ anyị ga-enwe Cyberpunk 2077, isiokwu na-esote ma nwee nnukwu ọchịchọ nke ọmụmụ a sitere na Eastern Europe.
Logha bụ aha ọzọ kwesịrị ekwesị n'ime ụdị egwu ahụ ma ọ tụrụ anyị niile n'anya na ntọhapụ nke akụkụ nke anọ ya na njedebe nke afọ, nloghachi nke ndị agha Fans na-atụ anya, ndị nwekwara afọ ojuju na egwuregwu Bethesda. N'oge a, anyị ga-ahụ oke ala dị egwu nke Boston n'anya anyị ka anyị nwee ike inyocha ya n'akụkụ ikpeazụ. E degharịrị usoro ndị na-arụ ọrụ egwuregwu na usoro nke onye bu ya ụzọ, egwuregwu ọzọ nke gosipụtara oge, abụrụla ntọala Bethesda wusiri ike iji nye anyị otu egwuregwu nke nwere ike inye anyị ọtụtụ oge ọchị karịa ihu ezumike Krismas. .
Ọtụtụ ndị ọrụ nke Sony console na-ewere aha a na-enweghị ọhụụ nke ohuru PlayStation 4 dị ka egwuregwu kachasị mma na katalọgụ nke igwe. Mepụtara Site Software na aka site Hidetaka Miyazaki, Bloodborne ewe kpochapụwo ọcha si franchises dị ka Dark Mkpụrụ Obi na Demon si Mkpụrụ obi na-enye ha na ọhụrụ playable tinye-on iji mepụta otu n'ime ihe ndị kasị kpụ ọkụ n'ọnụ na-achọ ahụmahụ anyị enwewo ike igwu egwu a 2015 Ọ bụrụ na ị chebara ọbara ọbara ọ bụla ị wụsịrị n'ọtụtụ mkpụrụ obi gị na Mkpụrụ Obi, Ọbara a bụ ihe ahụ gị chọrọ.
Xenoblade Ihe E Mere X
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ahapụla Wii U maka ndị nwụrụ anwụ ma nwee nlegharị anya ha na akụkọ niile na nkọwa banyere Nintendo NX, eziokwu bụ na desktọpụ mkpụrụ obi ikpeazụ nke nnukwu N afọ a anatala otu egwuregwu kachasị mma n'ahịa. . N'ịga n'ihu na ihe ịga nke ọma emere na egwuregwu Wii, Monolith Software na-ewetara anyị eluigwe na ala jọgburu onwe ya, akụkọ ntolite zuru ezu na ohere ndị ọzọ iji nọrọ ọtụtụ iri na elekere elekere n'ihu Wii U.
N'ime ngosipụta Indie, nke n'afọ ndị na-adịbeghị anya enwegogo oke uto, anyị nwere ike igosipụta egwuregwu a dị iche iche. Ebumnuche ya gbara ọchịchịrị, nyocha ochie, ọgụ pụrụ iche na ụzọ pụrụ iche nke inwe ike ịme ndị enyi, mere Undertale otu n'ime egwuregwu kachasị ịtụnanya nke usoro ikpeazụ a nke 2015. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị ala dị n'okpuru ma bụrụ onye hụrụ ọkpọ aka dị ka pikselụ, Undertale bụ oké nhọrọ na ị ga-atụle.
Efu Kombat X
The vetiran soja saga kere site Ed Boon na John Tobias bụ kwesịrị ekwesị karịa mgbe ọ bụla na-egosi nke a bụ nke a masterful Mortal Kombat X. Na gameplay larịị, egwuregwu agbanweela a ọkpụrụkpụ mma, na ihe ike ọgụ na nke kasị mie emi egwuregwu mgbe hụrụ na. a aha nke saga. O nwere otutu egwuregwu, otutu ihe ojoo nke anyi huru na ndi agha nke na-azoputa ndi ochie, dika Sub-Zero na Scorpion, ma gbakwunye ihu ohuru, dika Cassi Cage, di egwu D'vorah ma ọ bụ eze ukwu ọhụrụ nke Mba uterwa, Kotal Kahn.
Na enweghị egwuregwu ọhụrụ Mario, Nintendo esitela na aka uwe ya nwee nchịkọta akụkọ siri ike na nke zuru oke nke na-enye anyị ohere ịmepụta ọkwa 2D ọ bụla sitere na ụwa nke ndị na-atụ mmiri mustachioed. Mepụta, kekọrịta ma ọ bụ budata, tie ma ọ bụ gbaa ndị enyi gị aka na Super Mario Onye kere nke nwere obodo sara mbara nke ga-ekwe nkwa ndụ egwuregwu ahụ ogologo oge.
Ndụ bụ Iju
Ndi French sitere na Dontnod Entertainment, otu ndi ahu ndi binyere aka chetara m, wetara anyi ihe nlere a di na Square Enix. Ihe nkata ahụ na-eme ka anyị mata ọrụ nke nwa akwụkwọ na-eto eto na-eto eto nwere ike ịlaghachi n'oge site na mmetụta a na-akpọ nru ububa ma gbanwee usoro nke eziokwu. Ndụ dị iche iche abụwo otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ndị egwuregwu na-adọrọ adọrọ bụ ndị nwere mmasị maka njem na a na-enyekwa ya onyinye dị egwu. N'ezie, ị ga-enye onye editọ nnukwu ụda aka na nkwojiaka, ebe ọ bụ na ọ nweghị ndepụta okwu n'asụsụ Spanish - na PC, ọ bụ ndị egwuregwu nke egwuregwu n'onwe ya na-akwadebe ihe mgbochi maka nsụgharị ahụ.
Anyị enweghị ike ichefu usoro isiokwu ndị ọzọ gafere site n'aka anyị na 2015 niile nke kwesịrị ka a mata maka ịdị mma ha na usoro ịgba egwu ha nyere anyị: Nbilite nke Tomb raider, Mad Max, Naanị Ihe Na-akpata 3, Rocket League, Forza Motorsport 6, Cgbọ ala Project, Ọsọ ọsọ na-agba ọsọ NEO, Ikpe mara ikpe nke Xrd Sign, Ori na Blind Forest, Yoshi's Woolly World, Teraway Unfolded, till Dawn, StarCraft II : Legacy of the Void, Codename STEAM, Age of Empires II HD: The African Kingdoms, SOMA, Ya Akụkọ o Nọmba ekwentị 2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Egwuregwu vidiyo kacha mma nke 2015
Akwụkwọ ozi si n’aka onye isi Nintendo nye ndị nwe ya
Top 10 desktọọpụ ihe nchọgharị weebụ